Windows 11 iingcebiso tricks guides optimize videos tutorials
Windows 11 Iingcebiso, amaqhinga, ukusebenzisa iMiyalelo, iividiyo
Windows 11 (kwaneenguqulelo ezindala) zinokubonisa umhla wokwenziwa kweefayile kunye neefolda. Ukuba umsebenzi uluncedo, yenza ukuba ikwazi ukubona umhla into eyenziwe ngayo. Uwusebenzisa njani umsebenzi...
Vala uphendlo lwewebhu ngaphakathi Windows 11-Yenza uphendlo lwe-Bing lungasebenzi
Namhlanje sikubonisa indlela yokufaka iRise Media Player entsha Windows 11. Ungakhuphela umdlali apha:...
Sebenzisa iNdlela kaThixo kwiWindows 11
Imowudi emnyama ezenzekelayo Windows 11
Sebenzisa Windows 11 ibhokisi yesanti
I-Microsoft Outlook igcina idatha yebhokisi yeposi kwifayile yedatha ye-Outlook. Ngokusekwe kuhlobo lweakhawunti ye-imeyile, i-Outlook inokudala ugcino olungaxhunyiwe kwi-intanethi. Itafile (OST) ifayile...
Ukugcina ii-imeyile ezivela kwi-Gmail-uyenza njani i-backup
Kuzanywe & uphononongo
I-Redkey F10 kuvavanyo-TOP cordless vacuum cleaner
I-Redkey F10 sisicoci se-vacuum esingenazintambo (isicoci sokufunxa esiphathwa ngesandla) esinombhobho wokufunxa ogobekayo kunye nemisebenzi emininzi. Uninzi lwezindlu zaseJamani zinesixhobo sokucoca i-vacuum yokucoca i-parquet, ikhaphethi, i-PVC okanye imigangatho ye-laminate ukugcina indlu icocekile kwaye icocekile.
Microsoft Modern Mobile Mouse izanyiwe
STRONG Wi-Fi ATRIA Mesh Home Kit 2100 uphononongo
Iingcebiso zeWhatsApp amaqhinga
Ugcino lwe-WhatsApp luxhonyiwe-lungisa umyalezo othi "Ukulungiswa kuyalungiswa"
Ngaba uzama ukwenza i-WhatsApp yogcino kwaye ayisebenzi? Oku kunokuba nezizathu ezininzi. Umsebenzi wesipele ngowoku ...
I-WhatsApp: Thumela kwaye ufumane iifoto ngokona mgangatho uphezulu ukusukela ngoku
Shiya izingxoxo zikaWhatsApp kwindawo yogcino
Emva kokubonisa apha ukuba ungasitshintsha njani isikhangeli esingagqibekanga Windows 11, namhlanje siza kukubonisa indlela yokutshintsha…
Cima i-backup kwi-iCloud-isebenza njani
Kuya kufuneka ucime ngoko nangoko ezi zicwangciso zi-5 kwi-iPhone
Iingcebiso zeWindows namacebo
Ekugqibeleni! Unayo ikhompyutha, incwadi yokubhalela okanye iPC 11 Windows kuthengiwe, kodwa njengabaphambili bayo 10 Windows, Windows 8 / 8.1, 7 Windows Kwaye iWindows Vista okanye i-XP izisa nenkqubo yokusebenza kaMicrosoft yamva nje ineenguqu ezininzi ezenza kube nzima ukuzilungiselela ekuqaleni.
iifestile.de ikunika iingcebiso eziluncedo kunye namacebo kunye nezisombululo ezahlukeneyo eziphakanyisiweyo kula maphepha alandelayo. Ngamanqaku kunye nendlela yokwenza iingxaki zokujongana neengxaki zeWindows kwikhompyuter yakho nakwiPC. Funda kuthi ukuba ungayilungisa njani Windows 10 kwaye wenze ikhompyuter yakho ngokukhawuleza.
Funda ngehardware yethu Tips kunye namaqhinga esoftware ngendlela onokuthi uyisebenzise ngayo iWindows yakho kwaye usebenze ngokukuko ngakumbi. Windows 10 ngokukodwa inikezela ngezicelo onokukhangela kunye nokuzifumana ngokukhawuleza.
Inkqubo yokusebenza yomsebenzisi iphinde yahlengahlengiswa ngokupheleleyo ukuyenza ukuba ibe lula nangakumbi kumsebenzisi. Windows 10 ikwachukumisa ngenkqubo yokhuseleko kunye neendlela ezintsha zokufaka. Ezinye zezicelo ezibandakanyiweyo ziye zahlaziywa.
Kodwa eyona nkqubo ilungileyo ayisebenzi ukuba awuyazi imisebenzi kunye nendlela yokuyisebenzisa. Nanku emi apha iifestile.de iluncedo ecaleni. Siza kukubonisa usebenzisa amanqaku aneenkcukacha kwaye
Imiyalelo esebenzayo, umzekelo, indlela yokwenza ingasebenzi imiyalezo yokukhuseleko Windows 10 okanye indlela yokwenza Yenza Windows 10 ngokukhawuleza nangokukhawuleza. Ewe uya kufumana iingcebiso kunye namaqhinga ezinye iinkqubo zokusebenza ezinje ngeWindows 7, 8, Vista, XP kunye neenguqulelo ezindala apha.
Ukongeza, siya kukunceda usebenzise iiWindows zakho ngokukunika nawe Software amaqhinga ukubonelela. Siye sabeka ndawonye iingcebiso kunye noncedo lwezixhobo zakho. Ukongeza kwiWindows imiyalelo, sinikezela ngezinye izinto ezininzi ezinomdla ngayo yonke into enento yokwenza neekhompyuter kunye netekhnoloji. Silwandisile uluhlu lwethu kwaye sikwabonelela Tutorials zeVidiyo e. Ukujonga kwezethu Ijelo le-Youtube Ngokuqinisekileyo kufanelekile.
Sikwabonelela ngemiyalelo eneenkcukacha ngendlela yokukhusela ikhompyuter yakho. Ukuba ikhompyuter yakho inesifo se-malware okanye esinye isitshabalalisi, jonga kwinqanaba lethu lokususa intsholongwane. Apho uya kufumana kufanelekile Imiyalelo yokususa i-malware.
Kutshanje siqale ukwabelana ngamava ethu ngezixhobo ezahlukeneyo, umz. B. Iitafile kunye nesoftware kwaye ziyenze zifumaneke. Ngapha koko, kukwakho nokhuphiswano rhoqo apho kukho iilayisensi ezahlukeneyo zokuphumelela.
Unathi uya kufumana Windows 11 iingcebiso kunye namacebo okulungiselela. Imiyalelo eluncedo, uphononongo lwezifundo zevidiyo, uphononongo lwemveliso kunye nolwazi oluncedo.
Nero Platinum Unlimited 67,14 yeEUR
10 Windows 629
Kuzanywe & uphononongo 145
Iingcebiso zeWhatsApp amaqhinga 85
11 Windows 45
Umkhangeli we-Edge 24
Imiyalelo: Yongeza inkqubo kwimenyu yomxholo Windows 11
Imiyalelo: Imowudi emnyama ye-Auto Windows 11
IFirefox 96 iyekile ukusebenza? indlela yokulungisa ingxaki
Amanqaku akutshanje windowspower.de